Muxuu CC Sharma’arke ka yiri shirka doorashooyinka? - Caasimada Online
Home Warar Muxuu CC Sharma’arke ka yiri shirka doorashooyinka?
Muxuu CC Sharma’arke ka yiri shirka doorashooyinka?
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa boggaadiyey wada-hadallada doorashooyinka ee ka bilaabanaya gudaha magaalada Muqdisho, kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Shirweynahan oo kusoo aadayo, xilli xasaasi ah lagu wadaa in laga soo saaro go’aanno culus oo lagu jiheynayo doorashooyinka Soomaaliya ee sanadkan 2021-ka, si looga gudbo marxaladda adag iyo xaaladda kala guurka ah ee ay haatan ku jirto Soomaaliya.